တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကြီး ပြင်သစ်အဆိုတော် Édith Piaf ရဲ့“La Vie en rose” သီချင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ – Trend.com.mm
အငြင်းပွားစရာတွေရှိခဲ့တဲ့ “La Vie en rose” သီချင်းဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတကာ
က အသိမှတ်ပြုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် ယနေ့ထိရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို ပြင်သစ်အဆိုတော် Édith Piaf (၁၉၁၅ ဒီဇင်ဘာ – ၁၉၆၃ အောက်တိုဘာ) က ၁၉၄၅ခုနှစ်မှာ ရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ မှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းခေါင်းစဉ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင် ”Life In Pink” ၊ “Life in Rosy Hues” (သို့) “Life through Rose-coloured glasses“ လို့ အမည်ရပါတယ်။ တေးသွားဂီတသံစဉ်ကိုတော့ Marguerite Monnot နဲ့ Louis Guglielmi aka Louiguy တို့
“La Vie en rose” ကို Édith Piaf က “les choses en rose” (“Things in pink”) လို့ အရင်ဆုံးအမည်ပေးခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း Marianne Michel က “La Vie en rose” လို့ ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းအောင်မြင်မှုရဲ့  တစ်စိတ်တစ်ဒေသကတော့ စာသားတွေဟာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကို ခံစားခဲ့ရသူများအတွက် ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
“La Vie en rose” နာမည်နဲ့ပဲ Édith Piaf အကြောင်းကို ပြင်သစ်ဂီတဆိုင်ရာ အကျော်အမော်
တစ်ယောက်ရဲ့အတ္တုပ္ပတ္တိအဖြစ် ဒါရိုက်တာ Olivier Dahan က ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Piaf အဖြစ် မင်းသမီး Marion Cotillard က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Cotillard ရဲ့သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုကြောင့် အကောင်းဆုံးဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် အကယ်ဒမီရရှိဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေဟာ သန်းပေါင်း ၈၆.၃ ဒေါ်လာထိရရှိခဲ့ပါတယ်။
Édith Piaf ရဲ့ငယ်ဘဝကနေ အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ထိ သူမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးသတ်ကို အိုလံပစ်ပွဲမှာ “Non, je ne regrette rien” သီချင်းနဲ့ Édith Piaf ဖျော်ဖြေရင်း ဇာတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
“La Vie en rose” သီချင်းကို cover version အနေနဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်များဖြစ်တဲ့ Andrea Bocelli, Audrey Hepburn, Bing Crosby, Carla Bruni, Céline Dion, Dalida … စသဖြင့် အများကြီးပဲ ပြန်လည်သီဆိုထားကြပါတယ်။ သီချင်းနားဆင်လိုသူများအတွက် “La Vie en rose” မူရင်းသီချင်းကို ပြင်သစ် စာသားနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသား နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l’homme auquel j’appartiens
Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d’amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur Dont je connais la cause C’est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l’a dit, l’a juré pour la vie Et dès que je l’aperçois Alors je sens en moi Mon coeur qui bat
Des nuits d’amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Les ennuis, les chagrins s’effacent Heureux, heureux à en mourir
Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d’amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur Dont je connais la cause C’est toi pour moi, moi pour lui dans la vie Il me l’a dit, l’a juré pour la vie
Et dès que je l’aperçois Alors je sens en moi Mon coeur qui bat
With eyes which make mine lower, A smile which is lost on his lips, That’s the unembellished portrait Of the man to whom I belong.
When he takes me in his arms He speaks to me inalow voice, I see life as if it were rose-tinted. He whispers words to declare to me his love Words of the everyday And that does something to me.
He has entered into my heart A piece of happiness the cause of which I know full well. It’s him for me, me for him in life He said that to me, swore to me “forever”. And as soon as I see him So I feel in me My heart which beat
May the nights on which we make love never end, A great joy which takes its place The trouble, the grief are removed Content, content to die of it
When he takes me in his arms He speaks to me inavery low voice, I see life as if it were rose-tinted. He whispers words to declare to me his love Words of the everyday And that does something to me.
He has entered into my heart A piece of happiness the cause of which I recognise. It’s him for me, me for him in life He said that to me, swore to me forever. And as soon as I see him So do I feel in me My heart which beat
Ref: French Moments